Tuesday November 20, 2018 - 18:41:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamada Dowladda oo gaari gaashaaman ku wata magaalada Marka
Wararka ka imaanaya deegaanka Jilib Marka ayaa sheegaya in dagaallo culus ay maanta gelinkii dambe halkaasi ku dhaxmareen xoogaga Al Shabaab iyo maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dagaalka oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa sababay in khasaara lixaad leh dhabarka loo saariyo ciidamada dowladda Federaalka, wararka laga helayo deegaanka Jilib Marka ayaa sheegaya in ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay dagaalka ku qabsadeen gaari gaashaaman iyo saanado hub ah.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Dowladda Federaalka ay isaga firxadeen deegaanka kadib markii loogu itaal sheegtay dagaalkii maanta balse weerar kale oo dhabbagal ah ayay lakulmeen intii aysan dib ugu guran magaalada Marka.
"kadib dagaal culus oo maanta gelinkii dambe ka dhacay deegaanka Jilib Marka ee duleedka Muqdisho ayay ciidamada Mujaahidiinta ugu suurtagashay in ay maleeshiyaadka dowladda ka qabsadaan gaari Beebe ah iyo saanado hub ah" sidaas waxaa yiri qof goob jooge ah.
War kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa lagu xaqiijiyay in ciidamadoodu ay qabsadeen gaari Beebe ah iyo hub islamarkaana ay dileen dhowr askari oo katirsan ciidamada Farmaajo.
Ilo wareedyo madax banaan ayaa xaqiijinaya in maleeshiyaadka DF-ka laga qabsaday gaari Beebe ah oo kamid ahaa gaadiid ay dowladda Imaaraatka Carabta siisay maleeshiyaadka dowladda, ciidamadan lagu jebiyay dagaalkii maanta ayaa ahaa kuwa isbuucyo ka hor uu magaalada Marka ku booqday Max'med Cabdullaahi Farmaajo.